यो प्यासेजबाट पढेको किताबको अनुमान लगाउनुहोस् | वर्तमान साहित्य
लामो समय भयो जबदेखि म तपाईलाई एक लेख ल्याएको छु जसको विषय तपाईको मनपर्ने मध्ये एक हो: साहित्यिक खेलहरू। यस अवसरमा, आज मैले तपाईंलाई प्रस्तुत गरेको लेख यस बारेमा छ मैले पढिरहेको किताब अनुमान लगाउनुहोस् यस समयमा खण्डहरूको श्रृंखलाबाट जुन मैले तपाईंलाई यहाँ राख्ने छु। यस भन्दा बढि केहि पनि छैन। न त लेखक न त साहित्य शैली जुन यो सम्बन्धित छ राखिने छ, न त निश्चित नै यो गुगलमा उत्तर खोज्न लायक हुनेछ। हामी आफैं ईमानदार हुन गरौं!
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ र यसलाई थप अन्तर्क्रियात्मक बनाउनको लागि, तपाइँ त्यहि पुस्तकको साथ गर्न सक्नुहुन्छ जुन हाल तपाइँसँग छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंसँग यसका लागि टिप्पणी सेक्सन छ। खेल्न जाऔ? अर्को, म तपाईंलाई यो अद्भुत पुस्तकको केही अंशहरू छोडदछु जुन अहिले मेरो हातमा छ।
1 पुस्तक बाट प्यासेजेस
1.1 खण्ड १
1.2 खण्ड १
1.3 खण्ड १
पुस्तक बाट प्यासेजेस
जंगली प्रकृति यसको साथ चिकित्सा को बंडल ले; यसले एक महिला हुनु र जान्नुपर्ने सबै कुरा बोक्दछ। यसले सबै चीजहरूको लागि औषधि बोक्छ। यसले कथाहरू र सपनाहरू, शब्दहरू, गीतहरू, संकेतहरू र प्रतीकहरू बोक्दछ। यो दुबै गाडी र गन्तव्य हो।
कथाहरू औषधी हुन्। मैले पहिलो सुनेकोले म तिनीहरूमा मोहित भए। तिनीहरूसँग असाधारण शक्ति छ; तिनीहरू माग गर्दैनन् कि हामी केहि गर्छौं वा अभ्यासमा राख्छौं: हामीले सुन्न मात्र पर्छ। कथाहरूमा कुनै पनि हराएको ड्राइभ मर्मत गर्न वा पुन: प्राप्ति गर्न उपायहरू समावेश छन्। कथाहरूले भावनाहरू, उदासिनता, प्रश्नहरू, लालसा र अन्तर्दृष्टिलाई उत्प्रेरित गर्दछ जुन स्काउटेन्ट रूपमा सतही प्रकारमा पुर्‍याइन्छ, यस अवस्थामा, जंगली महिला।
यो मरेपछि के हुन्छ? भ्रम, अपेक्षाहरू, सबै प्राप्त गर्ने इच्छा, केवल सुन्दर चाहिन्छ, सबैकुरा मर्दछ। प्रेमले सँधै मृत्युको प्रकृतिमा जान्छ किनकि यस प्रतिबद्धतामा संलग्न हुनु किन यति आत्मसंयम र यति धेरै आध्यात्मिक बल चाहिन्छ भनेर बुझिन्छ।
तिमीलाई थाहा छ यो कुन किताब हो? कुन खण्डमा तपाईंले कुन शीर्षकको बारेमा कुरा गर्नुभयो भनेर पत्ता लगाउनु भयो? यदि तपाइँ सहभागी हुन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ हाम्रो टिप्पणी अनुभागमा अहिले पढिरहनुभएको पुस्तकबाट केहि अंशहरू राख्नुहोस् र हामी सबै खेलौं। रमाइलो हुने छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » मलाई लाग्छ कि यी अंशहरू मार्फत म पढ्दै छु
यो "ब्वाँसोहरू संग दौडिने महिला" हुन सक्छ। शुभेक्षा सहित
आयशालाई जवाफ दिनुहोस्
राहेल गोन्जालेज भन्यो
ब्वाँसोहरू संग दौडिएकी महिला।
मैले फोटो र पहिलो अंशमा घटाएको छु।
राकेल गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
अबी एस्पिनोजा भन्यो
ब्वाँसोहरू संग दौडिन महिला ... म यो मन पर्छ।
Aby Espinoza लाई जवाफ दिनुहोस्
लौरा मे भन्यो
मलाई लाग्छ अनुमान लगाउने खेल एक शानदार विचार हो hahaha
लौरा मेयो लाई जवाफ दिनुहोस्
रे रामन भन्यो
म अनुमान गर्न सक्दिन कि तिनीहरू कुन पुस्तकहरू हुन्, तर तिनीहरू पक्कै पनि खराब र असहनीय छन्।
रे रामोनलाई जवाफ दिनुहोस्
गेब्रिएला भेगा भन्यो
महिला जो क्लेरसा पिन्कोला द्वारा ब्वाँसो संग दौडन्छन् !!
गेब्रिएला भेगालाई जवाफ दिनुहोस्
लिन डब्ल्यू। भन्यो
ब्वाँसोहरू संग दौडिएकी महिला, म अहिले अहिले पढिरहेको छु
Lynn W. लाई जवाफ दिनुहोस्।